Mukhavets - बेलारुस मा एक नदी: विवरण र भूगोल
नदी Mukhavets बेलारुस मा - को सबै भन्दा ठूलो tributary पश्चिमी बग देश मा। नदी, साथै यसमा स्थित शहर को सूची, को विवरण, तपाईं यस लेखमा पाउनुहुनेछ।
बेलारुस मा नदी Mukhavets: विवरण
पूर्वी युरोप मा सबै भन्दा ठूलो नदी प्रणाली - नदी पश्चिमी बग नदी को एक सही tributary छ। Mukhavets - को भित्र स्थित छ जो नदी, ब्रेस्ट क्षेत्र बेलारुस को। यसलाई आफ्नो लम्बाइ मात्र 113 किलोमिटर छ, सानो छ। नदी देखि आफ्नो पानी 6350 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सङ्कलन।
नदी बेलारुस मा Mukhavets सुरु कहाँ छ? को watercourse को विवरण यस पक्षलाई सुरु गर्नुपर्छ।
Mukhavets स्रोत एक क्रीक फ्लाई को Wets च्यानल संग मर्ज जहाँ Pruzhany को शहर, नजिकै स्थित छ। Mukhavets - सम्पूर्ण Polesie सादा भित्र बग्छ एक नदी, त्यसैले उनको पतन को मूल्य र ढलान एकदम सानो छ। तसर्थ, बिन्दु स्रोत र Mukhavets मुख भिन्नता मात्र 29 मिटर छ।
सबै भन्दा ठूलो tributaries Mukhavets Zhabinka, Dahlovku, Trostyanitsu, महिला र रीता समावेश गर्नुपर्छ। Mukhavets ब्रेस्ट को प्रसिद्ध शहर भित्र पश्चिमी बग मा बग्छ।
Mukhavets नदी उपत्यका तल माथि गर्न दुई किलोमिटर माथिल्लो पुग्छ मा 400 मीटर देखि विस्तार। नदीको floodplain केही ठाउँमा दलदली र यसको च्यानल - artificially सोझो र च्यानल मा गरियो। यसबाहेक, Dneprovsko-बग Mukhavets च्यानल द्वारा एक नदी बेसिन Dnieper संग संचार छ - Pripiat।
पहिलो नदी hydrological अध्ययन मात्र बीसौँ शताब्दीको 20s मा बाहिर थिए। Mukhavets अधिकतम पानी स्तर तुरुन्तै खोल्ने पछि, लेट मार्च अवलोकन। नदी सामान्यतया डिसेम्बर पहिलो आधा मा, freezes।
को तट को विशेषताहरु
Mukhavets - नदी, कम बैंकहरू द्वारा विशेषता ठाडो केही ठाउँमा (आफ्नो उचाइ दुई मिटर भन्दा बढी छैन)। आफ्नो सक्रिय waterlogging योगदान जो नदी उपत्यका सादा, को ढलान। नदीको catchment क्षेत्रको सम्पूर्ण दक्षिणी र दक्षिण-पूर्वी भाग कम झूट swamps कब्जा छ, तथापि, तिनीहरूलाई केही अब भोकमरी। पोखरी Muhovtsa बिट (इलाका कुनै अधिक 2%) को किनारा मा नै समय मा।
नदी मा शहर र उल्लेखनीय साइटहरु
Kobrin, Zhabinka र ब्रेस्ट: Mukhavets मा तीन शहर स्थित। ब्रेस्ट किल्ला - र कहाँ नदीको मुख बेलारुस को इतिहास र वास्तुकला को उल्लेखनीय स्मारक बाँकी छ।
नदी मा मनोरञ्जनको वस्तुहरु को धेरै sanatoriums र स्वास्थ्य केन्द्र छन्। साथै, नदी को नाम Pruzhany को शहर देखि आइस हकी क्लब हो।
यस किले निकट स्थित छ नदी को मुख Mukhavets। यसको निर्माण XIX सताब्दी को 30 सेकेन्ड मा शुरू भयो र, 1914 सम्म, वास्तवमा जारी राखे। निर्माण कार्य को प्रारम्भिक चरण मा सैन्य इन्जिनियर कार्ल Opperman नेतृत्व।
1921 मा, रीगा को सन्धि अनुसार, ब्रेस्ट किल्ला डंडे पास। र सेप्टेम्बर 1939 मा ब्रेस्ट को पहिलो युद्धमा पछि किल्ला र शहर मा प्रवेश सोभियत संघ।
तर ब्रेस्ट किल्ला तल जुन 1941 मा वीर रक्षा गर्न इतिहास धन्यवाद मा भयो। यो नाजीहरूले र सोभियत लाल सेना बीच पहिलो प्रमुख युद्धमा थियो। को सेना: शक्तिहरू unequal थिए तेस्रो रैह को सोभियत लगभग दुई पटक भन्दा बढी लागि युद्धमा मा। तर, गढ रक्षा कि युद्धमा भाग लिए जो अष्ट्रीया सैनिक को एक को memoirs अनुसार, नौ दिनको लागि आयोजित "यो कारण के स्पष्ट छ।"
को गढ मा प्रारम्भिक 70-एँ मा एक भव्य स्मारक जटिल ती महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको स्मृति मा सिर्जना गरिएको थियो।
Mukhavets - यो, Polesie सबैभन्दा सुन्दर नदी को एक बेलारुस मा पश्चिमी बग को सबै भन्दा ठूलो tributary छ। 1941 मा हिटलर सेना को पहिलो झटका लाग्यो जो ब्रेस्ट किल्ला, - उनको मुख आंशिक XIX सताब्दी को एक अद्वितीय स्मारक संरक्षित थियो।
पहाड Suntar-Hayata: भौगोलिक स्थान, प्राकृतिक स्रोतहरू
जनावरहरूको दुर्लभ प्रजाति। जनावरहरूको rarest प्रजाति
Morel च्याउ: प्रकार र खाने
कुंभ पुरुष - तिनीहरूले के के हुन्? विशेषता साइन
संभोग गर्न एक मानिस कसरी ल्याउन - सुझाव र राज
कसरी केटी संग कुराकानी गर्न र उनको खुसी पार्न
Maresiev Alexei Petrovich जीवनी, कमाल
आधुनिक मोशाको प्लास्टर: प्रकार, लाभ र बेफाइदा